I-Moto Z4 Play iqinisekisiwe yiarhente yeCCC | Zonke iinkonzo ze-intanethi
Ifowuni entsha ye-Motorola enenombolo yemodeli 'XT1980-3' ifumene isatifikethi kwiKhomishini yoNxibelelwano ye-Federal (FCC) e-US Kucingelwa ukuba iyafana I-Moto Z4 Play esele sithethe ngayo izihlandlo ezidlulileyo.
Amaxwebhu avuzayo earhente aqukethe ulwazi oluncinci malunga nokubalulwa kwawo kunye nobukhulu bawo, kodwa asixelela into. Iinkcukacha ezithe kratya apha ngezantsi.
Iifilitha zeFCC zeMotorola XT1980-3 zikutyhile oko Imilinganiselo ye-157 x 75 mm. Ifowuni efanelekileyo Moto G7 Plus eyabhengezwa ngoFebruwari nayo ilinganisa i-157 x 75mm. Ke kujongeka ngathi i-XT1980-3 iya kuxhotyiswa ngescreen se-6.2-intshi ye-FullHD +, njengaleyo ikwiMoto G7 Plus.
Moto Z4 Dlala unikezele
Ngokusetyenziswa kweFCC kuyaziwa kwakhona ukuba i-XT1980-3 ixhotywe nge-3,600 mAh ibhetri exhasa i-18 W yokutshaja ngokukhawuleza Kwaye xa kufikwa kunxibelelwano, ipakishwe ngezinto ezinje nge-802.11ac iWi-Fi, iBluetooth LE, GPS, GLONASS, NFC, kunye nerediyo ye-FM. Akukho lwazi lukhoyo kwezinye iinkcukacha zomnxeba kwaye ngaphandle kokukhomba, abukho ubungqina obubambekayo bokubonisa ukuba ifowuni yeXT1980-3, eneneni, yiMoto Z4 Play.
Kunyaka ophelileyo, i-Motorola isungule I-Moto Z3 Play ngoJuni. Ke inkampani ephethwe yiLenovo kusenokwenzeka ukuba icwangcisa ukwazisa umlandeli wayo ngaxeshanye kulo nyaka.
I-Motorola P40 kunye neMoto Z4 Play zihluziwe ngokunikezela kwazo
Amarhe ajikeleze iMoto Z4 Play ayivezile loo nto Iya kuxhotyiswa nge-6.2-intshi S-AMOLED isibonisi esitshiweyo samanzi. Kulindelwe ukuba iza kuza ixhotyiswe ngumfundi osesikrinini sokufunda ngeminwe kwaye I-chipset ye-Snapdragon 675 amandla i-smartphone kunye ne-6GB ye-RAM. Kwakhona, kuza nokugcinwa kwi-128GB yokugcina. Ubukho besinxibelelanisi semagnethi sokudibanisa iiMoto Mods ziya kwahlula le fowuni kwezinye iifowuni eziphakathi. Ifowuni iya kuza ilayishwe I-Android 9.0 Pie, eya kubonelela ngamava akufutshane esitokhwe.
Kukho amarhe, ngokwahlukeneyo I-Motorola Moto Z4 Play ixhotywe nge-megapixel engama-5 ye-S1KGM48SP inzwa evela kwi-Q Technology. Kulindeleke ukuba iphehlelele kwiimodeli ezinje nge-4 GB ye-RAM + i-64 GB yokugcina kunye ne-6 GB ye-RAM + ne-128 GB yokugcina. Akukho lwazi kwixabiso leZ4 Play.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » IMotorola Moto Z4 Play iyeza-ngoku ifumana isatifikethi seFCC
I-Nubia Red Magic 3 ilungiselela ukufika ngebhetri engaphezulu kwe-5,000 mAh
I-Spark, enye yezona zinto zibalaseleyo kubathengi be-imeyile ye-iOS, iya kufumaneka kwi-Android